ကိုယ့်လက်ထဲက ဒိန်ခဲကို အရည်ပျော်စေခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ( MNF အတွက် ယူနိုက်တက် ဘက်မှ သုံးသပ်ခြင်း ) - SPORTS MYANMAR
ကိုယ့်လက်ထဲက ဒိန်ခဲကို အရည်ပျော်စေခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ( MNF အတွက် ယူနိုက်တက် ဘက်မှ သုံးသပ်ခြင်း )
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အဖြစ် ကတော့ ၃-၄ လ လောက် ပင်ပင် ပန်းပန်း ရှာဖွေ ထားတဲ့ ငွေတွေ ကို ကာစီနို မှာ တစ်ညတည်း အကုန်သုံး ပစ်ခဲ့တဲ့ လူမိုက် တစ်ယောက် လို ပါပဲ ။ ပွဲ ကတော့ အားလုံး မျှော်လင့် ထား တာ နဲ့ ဆန့်ကျင် ခဲ့ပြီး No offence vs No defence ဆိုတဲ့ အသုံး အနှုန်း ဟာ ပြောင်းပြန် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ သရေ ပွဲ ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် အထူး နစ်နာ ခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြောဖို့ တောင် မလိုတော့ ပါဘူး ။
လူထုတ် ပုံ ကနေ စလိုက် ကြရ အောင် . . . ပွဲ မစတင် တုန်းက မပါ လောက်ဘူး လို့ သတင်း ထွက် ထားတဲ့ ပေါ့ဘာ ရော ရက်ဖိုဒ့် ပါ လူစာရင်း ထဲ ပြန်ပါ လာခဲ့ပြီး ဘာသံ မှ မကြားတဲ့ ဘစ်ဆာကာ က မပါလာခဲ့ ပါဘူး ။ ဘစ်ဆာကာ မပါတဲ့ အတွက် တွမ်ဇီဘီ ကို ထည့် ခဲ့ပြီး အက်ရ်ှလေယန်း နဲ့ Side ပြောင်း ကစား သွားခဲ့ ပါတယ်
ကွင်းလယ် မှာ ပါရဲရား ၊ ပေါ့ဘာ နဲ့ တော်မီနေး တို့ ပွဲထွက် ခဲ့ပြီး တော်မီနေး ပုံစံ ကောင်း ရခဲ့ သလို ပေါ့ဘာ က လည်း ခြေမှန် ရခဲ့တာ ကြောင့် အာဆင်နယ် ကွင်းလယ် ကို အသာစီး ရခဲ့ ပါတယ် ။ တိုက်စစ် မှာတော့ ဂျိမ်းစ် ၊ လင်ဂတ် နဲ့ ရက်ဖိုဒ့် တို့ ကစားခဲ့ ပြီး ဂျိမ်းစ် က လွဲရင် ကျန်တဲ့ သူတွေ က အားရ စရာ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒီပွဲ မှာ အထူး ညံ့ခဲ့ တာ ကတော့ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် နဲ့ အက်ရ်ှလေ ယန်း တို့ ပါ ။ ယူနိုက်တက် ဟာ ထောင့်ကန် ဘော ၈ လုံး ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား လို အမြင့်ဘော အားသာသူ ကို ခေါ်ထား ပေမယ့် ထောင့်ကန်ဘောတွေ ကနေ အခုထိ တစ်လုံးမှ ဂိုးမရ ခဲ့ သေးပါဘူး ။ တည်ကန်ဘော ကနေ ခြိမ်းခြောက်နိုင် တယ် ဆိုတာ ခေါင်းတိုက် ကောင်းသူ ရှိဖို့ လိုသလို ဖြတ်တင်ဘော ကောင်းသူ ရှိဖို့လည်း လိုတယ် ဆိုတာ ကို ဆိုးရှား မေ့ နေ ပုံ ပါပဲ ။ ထောင့်ကန်ဘော တွေ ကို အက်ရ်ှလေယန်း ကန်နေ သရွေ့ ကတော့ ယူနိုက်တက် တို့ ဂိုးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ကတော့ တစ်ပွဲလုံး နှေးကွေး လေးလံပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို ဂျိမ်းစ် ရဲ့ တောင်ပံ ဘက်ကို လာလာ ရောနေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ၁ နာရီခွဲ ပွဲကြည့်ဖို့ ထ လာတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ က အိပ်ချင် မူးတူး ပရိသတ် တစ်ယောက်လို ပုံစံမျိုး နဲ့ လင်ဂတ် တစ်ယောက် ကစား သွားခဲ့ တာပါ ။ ဒီလူတွေ ကို ဆက်သုံးနေရင်တော့ သေချာ ပေါက် ဒုက္ခ ရောက် နေဦး မှာပါပဲ ။
ရက်ဖိုဒ့် ကိုလည်း ခြေမပေါ်သူ တစ်ယောက် အဖြစ် ခံစားမိ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှုး ဟာ ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်ခဲ့ ဘူးဆိုတာ ကို ထည့်တွက် ပေးသင့် သလို တိုက်စစ်မှုး စစ်စစ် တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အတွက် လည်း အရည် အသွေး လိုအပ်မှု တွေ ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် အတွက် အား၇ စရာ ကတော့ တော်မီနေး ပါပဲ ။ စကော့တလန်ကွင်းလယ်လူ ဟာ ဒီနှစ် ထဲ မှာ ပိုမို တိုးတက် လာခဲ့ပြီး ခံစစ်ပိုင်း ကိုသာ မက တိုက်စစ်ပိုင်း မှာပါ အားကိုး ရသူ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ မာကျောမှု ၊ လျှင်မြန်မှု ၊ လိမ်ခေါက် နိုင်မှုတွေ အပြင် ဇွဲကောင်းမှု ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု တွေ ကြောင့် တော်မီနေး ဟာ ဖလက်ချာ လက်သစ် ဆိုတဲ့ အမည်ထက် ပိုမို ထိုက်တန်သူ ဖြစ်လာ ဖို့ အလားအလာ ကောင်းတွေ တွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ ချေပဂိုး ပြန်မပေးရခင် အထိ အာဆင်နယ် ရဲ့ တိုက်စစ် ကို ထိန်းချုပ် ထားပြီး ကစားပုံ အသာစီး ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဂိုးပြန် ပေး လိုက်ရပြီး ၁၀ မိနစ် လောက် အထိ ကစားပုံ ပြန်တည် မရခဲ့ဘဲ အရင် ယူနိုက်တက် ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ ရပါတယ် ။ ဂိုးတွေ ထပ်မပေး လိုက်ရတာ ပဲ ကံကောင်းလှတယ်လို့ တောင်ဆို ရမလို ပါပဲ ။ အာဆင်နယ် ထက် အပြတ်အသတ် သာခဲ့တာကတော့ ပြစ်ဒဏ်ဘောတွေ ပါပဲ ။
ဒီဂီယာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လည်း နည်းနည်း ပြောချင် ပါတယ် ။ စပိန် ဂိုး သမား ဟာ ခံစစ် အရည်အသွေး တစ်မျိုးသာ ပိုင်နိုင်တယ် ဆိုတာ ကို တစ်ပွဲ ထက် တစ်ပွဲ ပိုမို လက်ခံ လာခဲ့ မိပါတယ် ။ ကာကွယ်မှု အပိုင်း မှာ ဒီဂီယာ ဟာ ပြောစရာ မလိုအောင် ထူးချွန်ပေမယ့် တိုက်စစ် အရည် အသွေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကန်တင် တာ ၊ လက်နဲ့ ပစ်ပေးတာ ၊ ဖမ်းမိတဲ့ ဘောလုံး ကို ကန်ပို့ပေး တဲ့ နေရာတွေ မှာတော့ တိကျမှု အလွန် အားနည်း တာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ကာကွယ်မှု တစ်မျိုး တည်းနဲ့ တော့ တစ်ပတ် ပေါင် ၃၇၅၀၀၀ ဆိုတာ များလွန်း တယ်လို့ ထင်မိ ပါတယ် ။
ဒီနှစ် ပရီးမီး ယားလိဂ် မှာ VAR ကို စသုံးခဲ့ပြီး တရားမျှတမှု အတော်များများ ကို ရှာဖွေ ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ မနေ့ ညက ပွဲမှာလည်း အော်ဘားမီးယန်း ရဲ့ ဂိုး အတွက် VAR ဟာ အမှန်တရား ဘက်မှာ ရပ်တည် ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီဂိုး မတိုင်ခင် မှာ အာဆင်နယ် နောက်ခံလူရဲ့ လက်ထိ ဘော ကိုတော့ VAR ကြီးကြပ်သူတွေ က ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ လစ်လျှူရှုခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး မှာတော့ ယူနိုက်တက် ဟာ ခက်ခက် ခဲခဲ နဲ့ ရထားတဲ့ ဦးဆောင်မှု ကို ပေါ့ပေါ့ ဆဆ လွှင့်ပစ် ခဲ့ ကြပါတယ် ။ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုးမှာ မက်ဂွဲယား ရဲ့ အပြစ် လုံးဝ မရှိပါဘူး ။ လူပေး မတိကျတဲ့ တွမ်ဇီဘီ ၊ အသင့် ရှိမနေတဲ့ လင်ဒီလော့ဖ် တို့ က သာ အဓိက တရားခံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မားကပ်ရက်ဖိုဒ့် ကတော့ အထောင်တိုက်စစ်မှုး ကောင်းတစ် ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင် အော်ဘားမီးယန်း ရဲ့ သွင်းဂိုး ကို ခဏခဏ ပြန်ကြည့် ပေးသင့် ပါတယ် ။
လာမယ့် ကြာသပတေးနေ့ မှာ ယူနိုက်တက် တို့ ယူရိုပါ လိဂ် အဝေးကွင်းပွဲ ကို ကစား ရပါမယ် ။ ဒါပြီးရင် အင်္ဂလန် ကို ပြန်လာပြီး နယူးကာဆယ် နဲ့ အဝေးကွင်းပွဲ ကို ဆက်ကစား ရပါဦး မယ် ။ အဝေးကွင်း ရလဒ်တွေ အလွန် ဆိုးတဲ့ ယူနိုက်တက် တို့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး နဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို သောကတွေ ပေးဦးမလဲ ဆိုတာ တော့ စောင့်ကြည့် ရဦး မှာပါ . . .
ကိုယျ့လကျထဲက ဒိနျခဲကို အရညျပြျောစခေဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ( MNF အတှကျ ယူနိုကျတကျ ဘကျမှ သုံးသပျခွငျး )
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အဖွဈ ကတော့ ၃-၄ လ လောကျ ပငျပငျ ပနျးပနျး ရှာဖှေ ထားတဲ့ ငှတှေေ ကို ကာစီနို မှာ တဈညတညျး အကုနျသုံး ပဈခဲ့တဲ့ လူမိုကျ တဈယောကျ လို ပါပဲ ။ ပှဲ ကတော့ အားလုံး မြှျောလငျ့ ထား တာ နဲ့ ဆနျ့ကငျြ ခဲ့ပွီး No offence vs No defence ဆိုတဲ့ အသုံး အနှုနျး ဟာ ပွောငျးပွနျ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီ သရေ ပှဲ ဟာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အထူး နဈနာ ခဲ့တယျ ဆိုတာ ပွောဖို့ တောငျ မလိုတော့ ပါဘူး ။
လူထုတျ ပုံ ကနေ စလိုကျ ကွရ အောငျ . . . ပှဲ မစတငျ တုနျးက မပါ လောကျဘူး လို့ သတငျး ထှကျ ထားတဲ့ ပေါ့ဘာ ရော ရကျဖိုဒျ့ ပါ လူစာရငျး ထဲ ပွနျပါ လာခဲ့ပွီး ဘာသံ မှ မကွားတဲ့ ဘဈဆာကာ က မပါလာခဲ့ ပါဘူး ။ ဘဈဆာကာ မပါတဲ့ အတှကျ တှမျဇီဘီ ကို ထညျ့ ခဲ့ပွီး အကျရျှလယေနျး နဲ့ Side ပွောငျး ကစား သှားခဲ့ ပါတယျ
ကှငျးလယျ မှာ ပါရဲရား ၊ ပေါ့ဘာ နဲ့ တျောမီနေး တို့ ပှဲထှကျ ခဲ့ပွီး တျောမီနေး ပုံစံ ကောငျး ရခဲ့ သလို ပေါ့ဘာ က လညျး ခွမှေနျ ရခဲ့တာ ကွောငျ့ အာဆငျနယျ ကှငျးလယျ ကို အသာစီး ရခဲ့ ပါတယျ ။ တိုကျစဈ မှာတော့ ဂြိမျးဈ ၊ လငျဂတျ နဲ့ ရကျဖိုဒျ့ တို့ ကစားခဲ့ ပွီး ဂြိမျးဈ က လှဲရငျ ကနျြတဲ့ သူတှေ က အားရ စရာ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒီပှဲ မှာ အထူး ညံ့ခဲ့ တာ ကတော့ ဂကျြဆီ လငျဂတျ နဲ့ အကျရျှလေ ယနျး တို့ ပါ ။ ယူနိုကျတကျ ဟာ ထောငျ့ကနျ ဘော ၈ လုံး ရခဲ့ ပါတယျ ။ ဟယျရီ မကျဂှဲယား လို အမွငျ့ဘော အားသာသူ ကို ချေါထား ပမေယျ့ ထောငျ့ကနျဘောတှေ ကနေ အခုထိ တဈလုံးမှ ဂိုးမရ ခဲ့ သေးပါဘူး ။ တညျကနျဘော ကနေ ခွိမျးခွောကျနိုငျ တယျ ဆိုတာ ခေါငျးတိုကျ ကောငျးသူ ရှိဖို့ လိုသလို ဖွတျတငျဘော ကောငျးသူ ရှိဖို့လညျး လိုတယျ ဆိုတာ ကို ဆိုးရှား မေ့ နေ ပုံ ပါပဲ ။ ထောငျ့ကနျဘော တှေ ကို အကျရျှလယေနျး ကနျနေ သရှေ့ ကတော့ ယူနိုကျတကျ တို့ ဂိုးရမှာ မဟုတျပါဘူး ။
ဂကျြဆီ လငျဂတျ ကတော့ တဈပှဲလုံး နှေးကှေး လေးလံပွီး မကွာခဏ ဆိုသလို ဂြိမျးဈ ရဲ့ တောငျပံ ဘကျကို လာလာ ရောနေ ခဲ့ ပါတယျ ။ ၁ နာရီခှဲ ပှဲကွညျ့ဖို့ ထ လာတဲ့ မွနျမာ နိုငျငံ က အိပျခငျြ မူးတူး ပရိသတျ တဈယောကျလို ပုံစံမြိုး နဲ့ လငျဂတျ တဈယောကျ ကစား သှားခဲ့ တာပါ ။ ဒီလူတှေ ကို ဆကျသုံးနရေငျတော့ သခြော ပေါကျ ဒုက်ခ ရောကျ နဦေး မှာပါပဲ ။
ရကျဖိုဒျ့ ကိုလညျး ခွမေပျေါသူ တဈယောကျ အဖွဈ ခံစားမိ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အင်ျဂလနျ တိုကျစဈမှုး ဟာ ကွံ့ခိုငျမှု မပွညျ့ခဲ့ ဘူးဆိုတာ ကို ထညျ့တှကျ ပေးသငျ့ သလို တိုကျစဈမှုး စဈစဈ တဈယောကျ ဖွဈဖို့ အတှကျ လညျး အရညျ အသှေး လိုအပျမှု တှေ ရှိနခေဲ့ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ အတှကျ အားရ စရာ ကတော့ တျောမီနေး ပါပဲ ။ စကော့တလနျကှငျးလယျလူ ဟာ ဒီနှဈ ထဲ မှာ ပိုမို တိုးတကျ လာခဲ့ပွီး ခံစဈပိုငျး ကိုသာ မက တိုကျစဈပိုငျး မှာပါ အားကိုး ရသူ ဖွဈလာခဲ့ ပါတယျ ။ မာကြောမှု ၊ လြှငျမွနျမှု ၊ လိမျခေါကျ နိုငျမှုတှေ အပွငျ ဇှဲကောငျးမှု ၊ ဦးဆောငျနိုငျမှု တှေ ကွောငျ့ တျောမီနေး ဟာ ဖလကျခြာ လကျသဈ ဆိုတဲ့ အမညျထကျ ပိုမို ထိုကျတနျသူ ဖွဈလာ ဖို့ အလားအလာ ကောငျးတှေ တှမွေ့ငျခဲ့ရ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ ဟာ ခပြေဂိုး ပွနျမပေးရခငျ အထိ အာဆငျနယျ ရဲ့ တိုကျစဈ ကို ထိနျးခြုပျ ထားပွီး ကစားပုံ အသာစီး ရခဲ့ ပါတယျ ။ ဂိုးပွနျ ပေး လိုကျရပွီး ၁၀ မိနဈ လောကျ အထိ ကစားပုံ ပွနျတညျ မရခဲ့ဘဲ အရငျ ယူနိုကျတကျ ပွနျဖွဈသှားခဲ့ ရပါတယျ ။ ဂိုးတှေ ထပျမပေး လိုကျရတာ ပဲ ကံကောငျးလှတယျလို့ တောငျဆို ရမလို ပါပဲ ။ အာဆငျနယျ ထကျ အပွတျအသတျ သာခဲ့တာကတော့ ပွဈဒဏျဘောတှေ ပါပဲ ။
ဒီဂီယာ နဲ့ ပတျသကျပွီး လညျး နညျးနညျး ပွောခငျြ ပါတယျ ။ စပိနျ ဂိုး သမား ဟာ ခံစဈ အရညျအသှေး တဈမြိုးသာ ပိုငျနိုငျတယျ ဆိုတာ ကို တဈပှဲ ထကျ တဈပှဲ ပိုမို လကျခံ လာခဲ့ မိပါတယျ ။ ကာကှယျမှု အပိုငျး မှာ ဒီဂီယာ ဟာ ပွောစရာ မလိုအောငျ ထူးခြှနျပမေယျ့ တိုကျစဈ အရညျ အသှေးတှေ ဖွဈတဲ့ ကနျတငျ တာ ၊ လကျနဲ့ ပဈပေးတာ ၊ ဖမျးမိတဲ့ ဘောလုံး ကို ကနျပို့ပေး တဲ့ နရောတှေ မှာတော့ တိကမြှု အလှနျ အားနညျး တာကို တှမွေ့ငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ကာကှယျမှု တဈမြိုး တညျးနဲ့ တော့ တဈပတျ ပေါငျ ၃၇၅၀၀၀ ဆိုတာ မြားလှနျး တယျလို့ ထငျမိ ပါတယျ ။
ဒီနှဈ ပရီးမီး ယားလိဂျ မှာ VAR ကို စသုံးခဲ့ပွီး တရားမြှတမှု အတျောမြားမြား ကို ရှာဖှေ ပေးနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ မနေ့ ညက ပှဲမှာလညျး အျောဘားမီးယနျး ရဲ့ ဂိုး အတှကျ VAR ဟာ အမှနျတရား ဘကျမှာ ရပျတညျ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဂိုး မတိုငျခငျ မှာ အာဆငျနယျ နောကျခံလူရဲ့ လကျထိ ဘော ကိုတော့ VAR ကွီးကွပျသူတှေ က ပွနျလညျ သုံးသပျဖို့ လဈလြှူရှုခဲ့ ပါတယျ ။
ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ နောကျဆုံး မှာတော့ ယူနိုကျတကျ ဟာ ခကျခကျ ခဲခဲ နဲ့ ရထားတဲ့ ဦးဆောငျမှု ကို ပေါ့ပေါ့ ဆဆ လှငျ့ပဈ ခဲ့ ကွပါတယျ ။ ပေးလိုကျရတဲ့ ဂိုးမှာ မကျဂှဲယား ရဲ့ အပွဈ လုံးဝ မရှိပါဘူး ။ လူပေး မတိကတြဲ့ တှမျဇီဘီ ၊ အသငျ့ ရှိမနတေဲ့ လငျဒီလော့ဖျ တို့ က သာ အဓိက တရားခံ ဖွဈခဲ့ပွီး မားကပျရကျဖိုဒျ့ ကတော့ အထောငျတိုကျစဈမှုး ကောငျးတဈ ယောကျ ဖွဈခငျြတယျ ဆိုရငျ အျောဘားမီးယနျး ရဲ့ သှငျးဂိုး ကို ခဏခဏ ပွနျကွညျ့ ပေးသငျ့ ပါတယျ ။
လာမယျ့ ကွာသပတေးနေ့ မှာ ယူနိုကျတကျ တို့ ယူရိုပါ လိဂျ အဝေးကှငျးပှဲ ကို ကစား ရပါမယျ ။ ဒါပွီးရငျ အင်ျဂလနျ ကို ပွနျလာပွီး နယူးကာဆယျ နဲ့ အဝေးကှငျးပှဲ ကို ဆကျကစား ရပါဦး မယျ ။ အဝေးကှငျး ရလဒျတှေ အလှနျ ဆိုးတဲ့ ယူနိုကျတကျ တို့ ဘယျလိုပုံစံမြိုး နဲ့ ပရိသတျတှေ ကို သောကတှေ ပေးဦးမလဲ ဆိုတာ တော့ စောငျ့ကွညျ့ ရဦး မှာပါ . . .